Bogga Ciyaaraha, 04 January 2015
Axad 4 January 2015
Argentine oo u soo Baxday Ciyaarta Final-ka
Xulka Argentine ayaa u soo baxay ciyaarta final-ka koobka addunka, kaddib markii rigoorayaal 4-2 ay uga adkaatay xulka dalka Netherlands . Labada kooxood oo ciyaar xiiso badan maanta yeeshay, ayaa 90-kii daqiiqo barbar dhac ku dhameystay.
Germany oo 7-1 kaga Badiyey Brazil
Xulka Brazil ayaa ka haray tartanka koobka adduunka 2014 kaddib markii kooxda Jarmalku ay 7-1 uga baddisay ciyaar ka tirsaneyd semi-finalka, waxaana halkaasi ku dhamaatay riyadii Brazil.
Argentine iyo Netherlands oo u soo Baxay Semifinal
Xulalka Argentine iyo Netherlands ayaa u soo baxay heerka semifinal-ka ee is araga afarta kooxood. Argentine waxay 1-0 uga adkaatay Belgium, halka Netherlands ay 4-3 rigoorayaal uga badisay Costa Rica.
Sawirro: Africa iyo Koobka Adduunka 2014
Lix waddan oo ka socda qaaradda Africa ayaa sannadkan ka qeybgalay koobka adduunka ee ka socda Brazil 2014
Germany oo u Gudubtay Semifinal-ka
Xulka dalka Germany ayaa u gudbay heerka semifinal-ka ee ciyaaraha koobka adduunka ee ka socda Brazil, kaddib markii ay 1-0 uga badiyeen xulka qaranka Faransiiska.
Maraykanka oo ka Haray Koobka Adduunka
Ciyaaraha Koobka Adduunka waxa hadda iskugu soo haray siddeed kooxood oo u baratamaya in midkood uu gacanta ku dhigo koobka oo markan lagu qabanayo dalka Brazil